Ukuqonda Izimali Zokugcina Ummeli we-UAE kanye Nezinsizakalo Zezomthetho. 0
Umthetho Uqinisekisa i-Dubai
Usibhalele ku- case@lawyersuae.com | Izingcingo eziphuthumayo + 971506531334 + 971558018669
Ukuhunyushwa Kwezomthetho (Isi-Arabhu)
Amaklayenti Womhlaba jikelele
Thola Ummeli Ofanele e-UAE
Incwadi Yamandla Ommeli
Bheka Amacala obugebengu e-UAE
Ukuboshwa / Ukuboshwa esikhumulweni sezindiza
I-WILLS eyodwa / I-WILLS eyamangalisa
Izinhlobo Zokwenza Ubugebengu
Amacala Wokushushumbisa Imali
Ukukhwabanisa - Umthetho Wobugebengu
Izaziso ezibomvu ze-INTERPOL
I-Interpol Isebenzisa Imidiya Yezokuxhumana
Extradition & Intl Umthetho
I-DIFC, Ukulamula, iMaritime
Amaphutha ajwayelekile ekulamuleni
Umhlahlandlela Womthetho Wokulamula
Sebenzisa Umthetho Wokulamula
Ummeli Wezinsizakalo Zasolwandle
Umthetho Wasolwandle E-UAE
Izinkinga Zomthetho Wezasolwandle wase-UAE
Amaphutha Omthetho Wasolwandle
Izimangalo Zokulimala Okuphezulu
Ummeli Wokulimala Komuntu siqu
Ummeli Wezimangalo Zomshuwalense
Izingozi Zohamba Ngezikebhe
Ukuxazulula Izingxabano Zebhizinisi
Isixazululo Sokubuyiselwa Kwesikweletu
Izinsizakalo Zomthetho Zokugcina
Amathiphu Esivumelwano Sokugcina Imali
Amacala wezezakhiwo / wezakhiwo
Thenga Impahla eDubai
Ukuqonda Izisekelo Zommeli we-UAE Imali Yokugcinwa Kwezimali kanye Nezinsizakalo Zezomthetho.
1 Comment	/ ummeli, I-Business Law, imithetho yamafemu / By Sarah
Izimali ezikhokhelwa ummeli we-UAE nezinsizakalo Zezomthetho
Ummeli kufanele abe yindawo yakho yokuqala yokuxhumana nanoma yiziphi izindaba zomthetho onazo; bayakwazi ukungena nokuphuma komthetho. Kepha yini i- imali yesamba? Futhi yini okudingeka uyazi mayelana nezinsizakalo zomthetho eDubai, e-Abu Dhabi, nakwamanye ama-Emirates? Ufike endaweni efanele ukuthola izimpendulo.
Esikhathini esithile kwezebhizinisi noma ezimweni zomuntu siqu, lapho iklayenti lakho noma abahlinzeki bakho besabisa ukubiza ummeli wabo nganoma iyiphi inkinga yezomthetho, Ngakho-ke ungaba nommeli noma inkampani yabameli "ekugcinweni." Ukuba nommeli kokugcina kusho ukuthi iklayenti lakho likhokha ummeli we-UAE imali encane ekhokhwayo njalo. Ngokubuyisela, ummeli wenza izinsizakalo ezithile zezomthetho noma iseluleko sezomthetho noma nini lapho udinga usizo lwabo. Leyo yincazelo yesigcini noma incazelo yesigcini.
Ukuba nama-Retainers kuwusizo kakhulu kumabhizinisi adinga umsebenzi oqhubekayo wezomthetho kepha angenayo imali eyanele yokuqasha ummeli wase-Dubai ngokugcwele.
Kubalulekile ukwazi ukuthi kufanele uxhumane nini nommeli ngqo. Kepha ngaphambi kokwenza lokhu, kufanele uqiniseke ukuthi unecala. Kodwa-ke, kuzoba nezikhathi eziningi lapho ungaqiniseki khona, futhi kulungile ukubuza eyodwa. Kodwa kufanele ube nento eyodwa engqondweni yakho; kubalulekile ukubambisana nommeli wakho futhi umethembe. Kokubili iklayenti nommeli kumele basebenze njengethimba uma befuna ukuthola imiphumela emihle.
Iyini imali yokugcina imali?
Lokhu kungabizwa kalula izinkokhelo eziphindaphindwayo ezenziwa ngezinsizakalo zommeli. Inikeza ummeli umuzwa wokuzethemba ukuthi bazokhokhelwa ngemisebenzi yabo. Abagcina isikhathi eside kangakanani? Izinkontileka Zabagcini bezimali zihlala unyaka wonke.
Imali yokugcina imali kanye ne-UAE
I-UAE ingenye yezindawo eziyinhloko lapho ama-firms asemthethweni kakhulu ayatholakala. Uzothola amafemu abameli ahamba phambili avela kuwo wonke umhlaba avule nehhovisi noma amabili kule ngxenye yomhlaba. Ngokwemvelo-ke, izindleko nazo ziyoba phezulu. Izimali zokugcina imali ziyinto abameli be-UAE abamile ngayo. Noma ungathola izindawo eziningi ezingeke zenze izidingo ezinjalo, abaningi baqinisekisa ukuthi le mali ikhokhwa ngaphambi kwanoma yiziphi izinsizakalo ezinikeziwe. Abameli bozakwethu bakhokhisa kakhulu, kulandelwe abaphezulu. Kodwa-ke, kufanele kuqashelwe ukuthi ngisho nalabo abangabasizi bommeli kuphela babiza okungenani inani eliphansi.
Izinkampani eziningi ziqinisekisa ukubonakala okusobala ngokuphelele, futhi yingakho amaklayenti engesabi ukwenza lolu lwazi. Ukuchazwa okucacile kunikezwa ukuthi kuyophi imali nokuthi uzosetshenziswa kanjani. Uma kukhona izindleko ezengeziwe eziphakama kunoma yikuphi, amaklayenti atshelwa ngesikhathi futhi anikezwa ngezizathu ezicacile.
I-UAE ihlinzeka ngezinketho zokubhekela ukuthi iklayenti lingakhokha malini ukugcina izinsizakalo zommeli. Izici okufanele zicatshangelwe maqondana nezimali zokugcina imali e-UAE zingamanani alinganisiwe namahora, imali yokugcina imali kanye neyezimfanelo, kanye nezimali ezincike ohlotsheni lwamacala. Isisekelo sokukhokhwa kwemali yabalondolozi kungenxa yomholo walokhu okulandelayo:
Tindlela esetshenziswa ngummeli,
Isigaba somthetho lapho icala lingelakhona; futhi
okubalulekile isethi lamakhono lommeli ngokuhlangenwe nakho.
Amacala ayinkimbinkimbi angadinga ukunakekelwa okwengeziwe, futhi izindleko zizokwanda ezimweni ezinjalo.
Yenza indlela efanele: Hlangana nommeli wakho.
Kukhona njalo indlela elungile kanye nendlela engafanele yokwenza izinto. Kumele uhlangane njalo nommeli wakho kanye ngaphambi kokuthatha isinqumo sokuthi kumele aluphathe yini udaba lwakho noma cha. Akudingekile nobabili ukuba nibe abangane, kodwa iklayenti nommeli kumele bazwane. Ukuhlangana nommeli wakho kuzokuvumela wena nommeli ukuba nizwisise omunye nomunye futhi ngokwethembeka nithole ukuthi ukusebenza ngokubambisana kungenzeka yini noma cha.
Amacala athanda ukubiza kakhulu, futhi awufuni ukuzithola usesimweni lapho usuvele usuyikhokhile imali yokugcina futhi unengeka ummeli wakho noma ungamethembi ngokwanele ukuthi angabhekana necala lakho. Ungakhohlwa ukumkhokhela ngehora akunikeza lona.
Uma othile ekutshela ukuthi ukuxoxisana namafemu ezomthetho aphezulu, ikakhulukazi endaweni efana ne-UAE akuyona inketho, bacele bacabange futhi. Ungahlala ubatshela ongabanikeza khona futhi ulalele abakushoyo. Kuzoba nenala ezoba namakhasimende anele afolene futhi athi cha kunoma ngubani ohlinzeka ngosheleni ngaphansi kwesilinganiso sabo sokufuna. Kepha-ke futhi, abanye banobubele futhi bazimisele ukukhula. Bangase bavume ukunikezwa okuphansi futhi bajabule ngakho.
Ukuthola ummeli omuhle wokugcinwa kwempahla e-UAE
I-UAE inezinkampani eziningi ezinkulu ezenzeka ukuthi zihambe phambili emhlabeni. Amafemu ezomthetho ahlinzeka ngezinsizakalo zomthetho ngabameli abangabamasiko nezizinda ezahlukahlukene. Bahlome kahle ngolwazi lweziphathimandla eziningi. Ukuthola ummeli omuhle e-UAE akuyona into enkulu. Uma amaphakethe akho ephelele, uzonakekelwa kahle kakhulu. Uzothola abameli abaningi abavela ezizindeni ezahlukahlukene futhi ukwazi ukukhuluma kahle ngesi-Arabhu.
Buza imibuzo eminingi bese uzama ukutshela amaqoqo akho ngokuningiliziwe ukuze ummeli azi kahle konke ngaphambi kwesikhathi. Lapho leli cala seliqhubekile, noma yiziphi izimanga azemukelwa yilezi zinkampani zabameli eDubai e-UAE.
Iseluleko esifanelekile sezomthetho: ngabe lokho kukhona eDubai?
Ezinye izinkampani ezinhle e-UAE zizimisele ukudlulisa ulwazi lwazo kulabo abasha ezweni lomthetho futhi okungenzeka bangabi nemali ezandleni zabo ngokushesha. Bavumela amaklayenti ukuthi abelane ngezinkinga zabo futhi baxoxe ngakho konke ngokuningiliziwe ukuze bakwazi ukuthola ukuthi banaso yini isimangalo noma cha. Uma lokhu sekwenziwe, bangabe sebebeluleka ngokuthi baqashe ummeli ofanele futhi babaqondise maqondana nezindleko ezizohambisana nakho konke lokhu.
Cela ukuthi usithumelele izidingo zakho zeSivumelwano Sokugcina ngomhlaka ngokuchofoza lapha noma Ukucela umhlangano ukuze kuxoxiswane ngokuqhubekayo.
1 icabange ngokuthi "Ukuqonda Izisekelo Zommeli We-Retainer Fees kanye Nezinsizakalo Zezomthetho."
February 6, 2018 at 10: 37 pm
Mnumzane othandekayo / Madam,
Nginenkinga nomthuthukisi onobhekene nokukhokha i-VAT. Okulandelayo yisethi emfushane yamaqiniso alolu cala:
Ngibhalele ikamelo lamagumbi ehotela ukuthi ngingalungiseli nomthuthukisi ngo-July 2014.
IFomu Lokubhuka lisayinwe bobabili abathintekayo.
Ifomu lichazwe intengo, isimiso sokukhokha kanye nemininingwane efanele yeyunithi.
Ifomu lithe cwaka ku-VAT.
Ngangiqale ukukhokha njengalokhu kuhlelo.
Phakathi naleso sikhathi, futhi uku-date akukho ukubhaliswa kwenziwa nge-DLD, njengoba kungekho-SPA esayinwe ehlelwe.
Ngithole uhlelo lwe-SPA ku-Jan 21, i-2018. Kuneminye imigomo nemibandela ephikisanayo futhi iyaxoxwa.
Okuwukuphela kombhalo okuvunyelwene ngawo kuze kube yimanje yiFomu Lokubhuka elisayiniwe elisathule ku-VAT. Ngiyaqonda ukuthi unjiniyela bekufanele axoxisane nami ngaphambi kukaJanuwari 01, 2018 ngentengo eshiwo kuyo, ukuthi ayenzanga futhi nentengo eseFomini Yokubhuka iyaqhubeka, ngokufanele.
Umthuthukisi akahlose ukusebenzisa iMithethonqubo Yesigwebo eshiwo emthethweni we-VAT futhi egcizelela ukuthi i-VAT iyimfanelo yomthengi.
Okwesibili, unjiniyela ungicela ukuthi ngikhokhele kuyo Imali Yokubhaliswa ne-DLD, ngokushesha, ngaphandle kwalokho kuzoba nenhlawulo futhi ngizoba nesibopho sokukhokha inhlawulo. Kushiwo isaziso se-DLD mayelana nomnqamulajuqu wokubhaliswa wangomhla ka-25 Juni 2015 ngesi-Arabhu (ikhophi linamathiselwe). Ngiyaqonda ukuthi usuku lwe-SPA esayiniwe luzobhekwa njengosuku lokuthenga ukubalwa kwezinsuku zokubambezeleka kokwenza isicelo sokubhaliswa ne-DLD.
(Qhubeka ekhasini 2 le-2)
Thayipha lapha ..
Izinhlobo Ezi-5 Zamacala Omthetho Wobugebengu eDubai nokuthi Ummeli Angakusiza Kanjani
Imithetho yokuphuza nokushayela eDubai noma e-UAE: Abashayeli Kumele Bahambisane Nomthetho ukugwema Ukujeziswa Okuqinile
Izizathu ezi-4 zokuthi kungani udinga ukuhlolwa okujwayelekile kwamaphoyisa: Izeluleko Zokuphepha Zabahambi Ukugwema Ukuboshwa Okungenzeka Ngaphambi Kokuvakashela E-Dubai noma e-UAE ngesikhathi se-COVID-19.
Indlela Engcono Kakhulu Yokululama Ngokomthetho Engozini: Amathiphu ayi-8 Ongawathatha Ngemuva Kwengozi
Imibuzo Evame Ukubuzwa Ngokuphathelene Nokushushumbisa Imali noma iHawala e-UAE: Ngabe Ngizobhekana Nezenzo Zokujeziswa?
Boy on Kwenzekani uma ungabuyiseli imali yokubolekwa kwemali mboleko noma i-credit card e-UAE?
U-Asad Bin Abood on Imininingwane Yenza Okufanayo! Ukungasebenzi Kwezokwelapha E-Dubai, UAE
Ukubaluleka Kweseluleko Sezomthetho Kuzinkontileka Zebhizinisi eDubai, e-UAE 00000 | Izinkampani Zomthetho eDubai on Ukusetshenziswa Kwemithetho Yangaphandle Nezinqumo Zezingxabano e-UAE. Okudingayo ukwazi.
Ann on Kwenzekani uma ungabuyiseli imali yokubolekwa kwemali mboleko noma i-credit card e-UAE?
UJuanitah Ntambi Precious on Izinhlobo Ezi-5 Zamacala Omthetho Wobugebengu eDubai nokuthi Ummeli Angakusiza Kanjani
Abameli Bezobugebengu E-Dubai
amafemu omthetho e-dubai
Imithetho Yasekhaya ye-UAE
Inkantolo Yomndeni Dubai
Abezimo Eziphuthumayo i-UAE
Khetha Amafemu Omthetho
Umeluleki Wezomthetho Onolwazi
Bheka Amacala obugebengu
Amacala Nobulungiswa Bobugebengu
I-Arabic Legal Humusha
Abameli Bendawo ye-UAE
Abameli bethu nabameli bakhona basentshonalanga nangasifunda futhi bafundise emazweni ahlukahlukene kanye nakwimimandla emaphakathi nendawo yasempumalanga. Unemibuzo mayelana nezinsizakalo zethu? Sicela uzizwe ukhululekile ukuxhumana nathi.
IBusiness Bay, Dubai, United Arab Emirates
Copyright © 2021 Law Firms Dubai | Inikezwe amandla yi Ezokuxhumana Copper
Disclaimer | Imibandela